Iska Ilow ”Mudane Wadada ayaa Jam ah waan soo daahayaa Gawaarida Dulaayo oo Suuqada Caalamka la keenay . | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Iska Ilow ”Mudane Wadada ayaa Jam ah waan soo daahayaa Gawaarida Dulaayo oo Suuqada Caalamka la keenay .
Iska Ilow ”Mudane Wadada ayaa Jam ah waan soo daahayaa Gawaarida Dulaayo oo Suuqada Caalamka la keenay .
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 8-08-16 11:25 AM Marba Marka ka dambeyso Waxaa Dunida ku soo badanaayo Hormar aan caadi eheyn Dalka Shinaha ayaa soo saaray Gaari Ma ahan Gaari Caadi ah Waa Gaari Dulaayo Garigaan waxaa lagu magacabaa AeroMobil.
Iska Ilow Wadada ayaa Jam eheet Ama wadooyinka ayaa Xirnaa Gordhaw Waxaa si toos ah Suuqyada Caalamka u soo Gali Doono Aeromobil ah neh gaari Aan Dhulka ku soconin sida Diyaarada U dulaayo .
Waxaa Xaqiiq ah in Qatar weyn ka imaan karto hadii Gawaaridaan La Isticmaalo Mid Kamid ah Dadkii sameyay ayaa xaqiijiyay in Garigaan Yahay Mid u wanagsaan Shaqsi Kasto Lama Shaacin Qiimaha lagu kale iibsan karo Gawaaridaan Casriga ah Balse Waxaa hubaal ah in ee Yihiin kuwo qaal ah.